Khabiirka Kala Duwan: Waa maxay SEO-ga iyo Maxay Muhiim u tahay?
SEO waa hab wax ku ool ah oo la awoodi karo si ay u gaarto macaamiisha cusub, u gudub boggaaga si fiican natiijooyinka baaritaanka raadinta oo kordhiya iibkaaga. Raadinta maadada raadinta ama SEO waxay ka dhigan tahay sameynta website-ka iyo qoraallada si ay u muujiyaan natiijooyinka raadinta. Inkastoo istaraatijiyado kala duwan oo suuq-geyn ah ay meesha ka baxayaan si ay u gaaraan dhagaystayaashaada, raadinta naqshadeynta waxay na siinaysaa awood aan ku gaarno dad badan marka ay raadiyaan macluumaadka la xiriira ereyada muhiimka ah, adeegyada, badeecadaha, iyo weedhaha - best way to store wheat. Taasi waa sababaha SEO ah ay leeyihiin qiyaastii afar iyo toban boqolkiiba boqolkiiba marka la barbar dhigo boqolkiiba laba meelood oo ka mid ah shabakadaha kale sida suuq-geynta emailka, daabacaadda daabacaadda, iyo suuq-geynta warbaahinta bulshada.
Intaa waxaa dheer, Alexander Peresunko, khabiir sare oo ka soo jeeda Semt , wuxuu xaqiijinayaa in SEO ay naga caawineyso inaan hagaajinno muuqaalka boggayaga natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ama dabiiciga ah, iyo raadinta mashiinka raadinta oo aan ku wareersanayn natiijooyinka baaritaanka ee labadaba waxay yihiin labadaba taatiko kala duwan.
Maxay SEO muhiim ugu tahay adiga?
Haddii aanad diirada saarin goobta ama blog-kaaga natiijooyinka raadinta, fursadahaaga ka lumitaanka taraafikadaada iyo macaamiishaada tartamayaasha way sarreeyaan maaddaama boggooda ay ka muuqdaan makiinada raadinta natiijooyinka ka badan bartaada ama website-kaaga Marka qof uu eego alaabta gaarka ah ama adeegyada internetka, wuxuu u noqonayaa Google, Bing ama Yahoo. Booqashadu waxay gaari kartaa website-kaaga adigoo raadinaya macluumaadka la xiriira alaabadaada iyo adeegyadaada. Cilmi baarayaashu waxay muujinayaan in boqolkiiba lixdan qaybood ee ka ganacsiga Google ay aadaan goobaha iyo blogyada ka muuqda saddexda ilaa afar natiijooyinka raadinta.
Sidee makiinadaha raadiyeyaashu u qiimeeyaan meesha ganacsiga loo kala horeeyo?
Mashiinnada raadinta waxay isticmaalaan algorithms si ay u qiimeeyaan meesha ganacsigu taagan yahay waxayna bixiyaan martida macluumaadka waxtarka leh ee muhiimka ah iyagoo isticmaalaya algorithms isla. Waa inaad hubisaa in goobtaada ku taal bogga ugu horeeya halkii ay ka ahayd 20. Tani, waa inaad diirada saartaa maamulka domain iyo qori maqaallada tayada mawduucyada la xidhiidha ganacsigaaga. Awoodda boggaaga ayaa lagu go'aamiyey iyada oo la adeegsanayo waxyaabo ka baxsan goobaha iyo meelaha banaan. Qaar ka mid ah ayaa lagu sharxay hoos.
Meel - Mashiinnada raadinta waxay bixiyaan darajo heer sare ah ee bogagga internetka kuwaas oo si joogta ah u daabacaya waxyaabo cusub oo ku saabsan mawduucyo gaar ah. Haddii aad leedahay bog internet ka ah, waa inaad si joogto ah u daabacdaa maqaalkana waxaadna dhistaa maamullada internetka.
Ka-baxsan - Mashiinnada raadinta waxay doonayaan in goobo kale ay dib ugu noqdaan bogagaaga internetka. Marka qaar ka mid ah bogag kale oo ku xiran maktabyadaada iyo dadku ay ka wadaagaan boggaga internetka ee xiriirka bulshada, waxaad yeelan doontaa liis heer sare ah natiijooyinka raadinta raadinta
Sida loo bilaabi lahaa wanaajinta mashiinka raadinta (SEO)?
Saameynta mashiinnada raadinta ayaa qaadan doona wakhti, laakiin waxay xaqiiqo bixin doontaa markaad soo booqato qof cusub. Haddii aad bilawday blogga, waxaa fiican inaad diirada saarto dhegeystayaashaada. Halkii aad ka qori lahayd mowduucyada guud, waa inaad daabacdaa nuxurka mawduuc gaar ah oo daboolaya maaddooyinka kala duwan. Markaad bilawdo qoraalka asaasiga ah, waxaad dejin doontaa awooda domainkaaga, waana inaad si joogto ah ula wadaagtaa warbaahinta bulshada.